Notsipahin’ireo Mpanao Fihetsiketsehana #CongressOccupied Ny Tolo-kevitry ny Filoha Taiwaney · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Avrily 2014 17:25 GMT
Notsipahin'ireo mpanao fihetsiketsehana mibodo ny Antenimieran'i Taiwan ny tolo-kevitra nampahafantarin’ ny filoha Ma Ying-jeou sy ny kabinetrany tamin'ny 3 Aprily izay milaza fa “hanaramaso” ny fifanekena ara-barotra hoavy miaraka amin'i Shina.
Nolazain'ireo mpikambana ao amin'ny hetsika #CongressOccupied ho “babangoana, tsy marina ary mandiso fanentanana” ilay tolo-kevitra izay tsy manome sehatra hoan'ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena sy fahefana hoan'ny Antenimiera mba handray anjara amin'ny fizotry ny fifampiraharahana na manova ny fifanekena – raha lazaina amin'ny teny hafa dia hijanona ao anaty “boaty mainty” ireo fifampiraharahana amin'izany fifanekena izany. Nanome lisitra ny fomba fanaraha-maso ao anatin'ny fitakiany ireo mpanao fihetsiketsehana
Ny fanoherana ny fifanekena ara-barotra eo amin'ny mpifanolotra moron-dranomasina, izay hanokafan'i Taiwan raharaham-barotra bebe kokoa amin'i Shina no mibahana ao amin'ny nosy hatramin'ny nidininan'ireo mpanao fihetsiketsehana voalohany tao ao amin'ny Antenimiera tamin'ny 18 Marsa 2014. Taiwaney atsasaky ny tapitrisa,[mg] tamin'ny 30 Marsa, no nanao fihetsiketseham-panoherana ny fifampiraharahana ara-barotra.
Teren'ny filoha handany ilay fifanarahana haingana araka izay azo atao ny antokon'ny fitondrana. Nolaviny ihany koa ny fanatontosana fivoriambe momba ny lalàmpanorenana hoan'ny olom-pirenena [zh] ary nolazainy ho heloka bevava ny hetsika fibodoana.
Sangan'asan'i Banksy misy nanova. “Tsy manam-basy na baomba izahay. Fahatezerana no mba hany anananay. Izany no antony tsy iraharahian'ny governemanta anay?” Sary avy amin'i GJ!!Taiwan. CC: NC.
Diso fanantenana tanteraka tamin'ny governemanta, fantatra amin'ny anarana hoe Mpanatanteraka Yuan i April Chuang, bilaogera politika malaza, ary niantso ny tolo-dalànan'izy ireo [zh] ho “Fandaminana hoan'ny TSY-fanarahamaso ny fifanarahana eo amin'ny mpifanolotra moron-dranomasina.”
Vitako ny mifanamby fa ny kinova farany amin'ity fitsipika ity raha be indrindra dia ny fidiran'ny Mpanao lalàna Yuan amin'ny dingana sasany, fa mbola hitoetra ho fitsipika tsy misy rafitra (fomba) fanaraha-maso hatrany izany.
Miteraka fisalasalana ho an'ny maro, fandrao nanome vahana ny foto-kevi-dehiben'ny “firenena iray” ho an'i Shina Tanibe ny fandavan'ny filoha Ma hanome fahefana ny mpanao lalàna hijery indray ny fifanarahana. Araka ny fitokisana ifampizaran'ny tontolo politika Taiwaney fatratra, dia tsy avelan'i Shina hanao fanovana amin'ny fifanarahan'ny mpifanolotra morondranomasina i Taiwan satria tsy eken'i Shina ny fijoroan'i Taiwan ho firenena manana fahefana mpanao lalàna manokana ho azy.
Naneho ny fahatezerany ao amin'ny PTT [zh], rafitra manana endrika famoaham-baovao lehibe indrindra ao Taiwan, ny mpiserasera. Ny sasany mametraka fa ny tsy fananan'ny mpanao lalàna fahefana hanara-maso ny fifampiraharahana ara-barotra dia samy hanohintohina na ny lalampanorenana na ny fiandrianam-pirenen'i Taiwan. Nanoratra, ohatra, i satyrs05:
Raha tsy famarotana an'i Taiwan ity fifanarahana ity dia fifanarahana tahaka ny ahoana no hamarotana an'i Taiwan?
Reporter Lee Chih-Te nanasongadina tao amin'ny Facebook [zh] fa nitsipaka ny maha-firenena an'i Taiwan ny filoha Ma nandritra ny valan-dresaka nataony:
Raha nanontaniana ny filoha raha afaka mitsipaka ny fifanekena misy ankehitriny isika ary hanomboka fifampiraharahana vaovao, ny valinteny mahazatra nataon'ny filoha Ma dia hoe, ” Hampidi-doza ny fitokisana antsika sy hahatonga ny vahoaka hafa hanam-pisalasalana manoloana antsika izany rehefa hanao fifampiraharahana amitsika ry zareo rahatrizay. ” [ … ] Tamin'ny valan-dresaka hoan'ny mpanao gazety nataony tamin'ny Asabotsy, tadidiko fa mpanangom-baovao telo no tao ary anisan'izany ny tenako no nanontany ny filoha Ma hoe maninona isika no tsy afa-manao fifampiraharahana vaovao. Na ninia tsy mahazo ny fanontanianay ny filoha Ma na mamerimberina ny valinteny fanaony. Tsy ho takatry ny fitondram-pitantanana Ma mihitsy fa manome fotoana fanararaotra mampazava ity raharaha ity isika fa manan-jò hanao fifanekena vaovao i Taiwan. Raha tsy mahavita izany ry zareo, dia afa-mandrafitra ny fehezanteny amin'izao teny izao aho : “Misy firenena maro hafa azo raisina ho ohatra nanomboka fifanarahana vaovao indray, … saingy hanohintohina indrindra ny fifandraisana eo amin'ny mpifanolotra moron-dranomasina izany, ka tsy noheverinay ny hanao safidy hanomboka fifanarahana vaovao”.
Miangavy anao aho ry Filoha Ma. Tsy maninona na hanao fifampiraharahana vaovao ianao na tsia, fa miangavy anao aho hanova ny famalianao. Aza ho lasa amperora fehezin'i Beijing. Nofiratsiko izany. Mino aho fa nofiratsinao ihany koa izany.